I-Instagram: uncediso kwipotifoliyo yakho yobungcali | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UAlicia gonzalez | | I intanethi
Bambalwa abantu emhlabeni abayi kuyazi i-Instagram, enye yezona ndawo zidumileyo zonxibelelwano lwangoku. Sisebenzise ukusebenzisa eli qonga njengendlela yokubonisa umhlaba imihla yethu yemihla ngemihla, kunye neefoto kunye nevidiyo. Kodwa inyani kukuba sinokufumana okuninzi ngaphandle kwayo kunokuba sinokucinga.
Okwangoku Enye yezona ndawo zidumileyo zonxibelelwano kwaye ngenani elikhulu elibhalisiweyo, liyimbonakalo ebonakalayo kwaye ivumela uhlalutyo lwempembelelo olupheleleyo ukuba lwenziwe Kutheni ungasebenzisi eli thuba lenethiwekhi njengesixhobo sonxibelelwano?
1 Uyisebenzisa njani i-Instagram?
2 Hlalutya imeko yakho
3 Cwangcisa umxholo wakho
4 Thatha iifoto ezisemgangathweni
5 Sukusebenzisa kakubi i-mockups
6 Yenza ukutya okufanayo
7 Thumela umxholo rhoqo
8 Sebenzisa iihaghtags
9 Yiba ngumsebenzisi osebenzayo
Uyisebenzisa njani i-Instagram?
Nabani na onokuthi abe neakhawunti kwi-Instagram kwaye abonise umsebenzi wakhe, kodwa zininzi iindlela zokwenza. Sikucebisa ngamanye amanqaku ukuba uwagcine engqondweni. Ukuba uyayisebenzisa, uya kuguqula ngokuqinisekileyo iprofayile yakho ye-Instagram kwiphothifoliyo eyiyo yobungcali, Fumana ukubonakala kwaye ufumane abathengi abatsha.
Hlalutya imeko yakho
Ngaphambi kokuba uqale ukulayisha umxholo ngokungxama, zibuze uthotho lwemibuzo:
Ndifuna ukubonisa ntoni kwiprofayile yam ye-Instagram?
Zithini iinjongo zale projekthi?
Ndifuna ukudlulisa ntoni ngezithuba zam?
Ngaba ndinemathiriyeli enomdla endinokuyifundisa?
Ndiza kukwazi kangakanani ukufaka umxholo?
Uninzi lwale mibuzo luya kuba lula ukuyiphendula, kwaye abanye kungafuneka uthathe ukhenketho lweeprojekthi zakho zobungcali kwaye uzibeke ngokulandelelana. Ucinga ukuba eli qonga kufuneka lisebenze njenge gqibezela kwi-resume yakho, Ke umxholo wakho kufuneka uthethe ngawe nomsebenzi wakho.
Iprofayile ye-Instagram @mvantri womculi uMarco Vannini
Cwangcisa umxholo wakho
Sele uyazi ukuba uza kuya njani kwiprofayili yakho, uziva ufuna ukugqithisa kumsebenzisi kwaye zeziphi iinjongo ozibekele zona.
Okwangoku, kubalulekile ukuba ucwangcise eyiphi umxholo uzakuba kwaye uza kuwubonisa njani.
Thatha ukhenketho lwakho iiprojekthi zobungcali, khetha ezo uzikholelwa kakhulu umdla okanye abo baziva bonelisekile kwaye, kwelinye icala, abo bangakhanyisiyo kodwa abangabachwephesha kwaye babonisa isimbo sakho somsebenzi.
Ukucaca malunga nento oza kuyibonisa kubalulekile kwaye kuya kwenza ukuba la manqaku alandelayo abelula.
Thatha iifoto ezisemgangathweni
Ukudala iifoto ezilungileyo kubalulekile. Qiniseka ukuba zonke iifoto zinxulumene nenye, oko kukuthi, zithembekile kwisitayile sakho. Kwelinye icala, ungalibali ukuba iifoto ozithathayo kufuneka zibe nokukhanya okuhle kwaye zijolise kakuhle, ke ngaphambi kokudubula, jonga. Iifoto ezithathwe ngaphandle kolindelo azibonisi mgangatho.
Sukusebenzisa kakubi i-mockups
Ukusetyenziswa kwe-mockups sisixhobo esifanelekileyo sokubonisa umsebenzi wakho, kodwa sukugqitha ngokuzisebenzisa, iya kwandisa umgangatho womsebenzi wakho ukuba iifoto zithathwe nguwe.
Yenza ukutya okufanayo
Xa uthatha imifanekiso, cinga ngendlela abaza kujonga ngayo kunye kwigridi yeprofayile yakho. Inomtsalane ngakumbi emehlweni kwaye inika umbono ongcono igridi esebenzayo, kunye neempapasho ezilungiselelwe ukusebenza ngokukodwa umntu ngamnye nangamaqela. Kungenxa yoko le nto amanqaku amabini abaluleke kakhulu, ukuba ucacile malunga nento ofuna ukuyithumela kwaye ucwangcise ngokuchanekileyo iimpapasho oza kuzilayisha, eli nqaku liza kuba lula kakhulu!
Uyilo lweprofayile ye-Instagram @tokillafashionvictim
Thumela umxholo rhoqo
Akunyanzelekanga ukuba ulayishe umxholo osemgangathweni kuphela, kodwa nawo abasebenzisi kufuneka babone ukuba uyasebenza. Yenza isicwangciso kwaye uthathe isigqibo sokuba mangaphi amaphepha oza kuwenza ngenyanga kwaye uzame ukuwahlonipha. Ukuba neprofayili enobudenge akunamtsalane.
Iihaghtags sisixhobo esihle sokwenza ukuba waziwe, ke kuyimpazamo ukungazisebenzisi. Hlaziya ezona zi-haghtags ezithandwayo kakhulu kwicandelo lakho kwaye uzisebenzise, nangona ulumke! ukuzisebenzisa gwenxa nako akulunganga; ulumke kwaye wongeze kuphela ezihambelana nomxholo wakho.
Yiba ngumsebenzisi osebenzayo
Ukongeza kokulayisha umxholo rhoqo, landela abanye abasebenzisi abanenkxalabo efanayo, yenza izimvo, phendula abo banxibelelana nawe kwaye uhlale ubukele.
Nokuba zeziphi iinjongo ozibekele zona, azizukuba lula ukufezekisa, ke sukukhathazeka xa ungenaziphumo ubuzifuna kungekudala. Sebenzisa esi sixhobo njengenkxaso xa ubonakalisa umsebenzi wakho, wasebenzise njengoncediso kwamanye amaqonga kwaye wonwabele ukufumana eyona nto uyithandayo kubuchule bakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » I intanethi » I-Instagram: ligalelo kwipotifoliyo yakho yobungcali